गलत रगत दिएर मृत्यु भएकी... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
गलत रगत दिएर मृत्यु भएकी बालिकाका बुवा भन्छन्: न्याय माग्दा धम्की दिए, प्रहरी उजुरी लिन मान्दैन
मृतक बालिकाको बुवा (बायाँ)।
यही वैशाख २३ गते गलत रगत दिएका कारण ज्यान गुमाएकी सर्लाही गौरैता नगरपालिका वडा नम्बर १०– सिसौटियाकी ५ वर्षीया बालिका आकृतिकुमारी साहका बुवा रामप्रवेश साहले चिकित्सकको लापरबाहीको कारण छोरीको ज्यान गएको भन्दै यसबारेमा छानबिन गरी सरकारले न्याय दिलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूहरू न्यायको लागि विभिन्न ठाउँमा भौतारिँदा पनि कतैबाट उचित न्याय नपाएको गुनासो पोखे।
उनले भने,‘हामी दिनहुँ न्याय खोज्दै विभिन्न सरकारी निकायहरूमा धाइरहेका छौं। तर, न्याय पाएका छैनौं। यसले हामीलाई अझै पीडा दिएको छ।’
शल्यक्रिया गर्नुपूर्व बिरामीको दुवै मृगौला ठीक रहेको तर शल्यक्रियापछि दुवै मृगौला फेल भएको रिपोर्ट देखाइएको पनि बालिकाको बुवाले सुनाए।
उनले भने,‘शल्यक्रिया गरेलगत्तै मृगौला फेल भएको मेडिकल रिपोर्ट छ। हामीलाई यसमा पनि शंका लागेको छ । यसबारेमा सत्य–तथ्य छानबिन हुनुपर्छ।’
आफूहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर पनि न्याय पाउँ भनि हारगुहारसमेत गरेको उनले सुनाए।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले उजुरी दर्तासमेत गर्न नमानेको दुःखेसो पोखे।
‘छोरीको मृत्युको सत्यतथ्य छानबिनका लागि आज १० दिन भयो हामीहरू सरकारी कार्यालय धाउन थालेको। तर, अहिलेसम्म सरकारी कार्यालयबाट सहयोग भएको छैन,’उनले भने,‘अब हामी कहाँ जाने ? हामीलाई कहिले न्याय दिनुहुन्छ ?
कार्यक्रममा बालिकाका आफन्त सुरेन्द्र यादवले शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकले जानाजान गल्ती गरेर गलत रगत चढाएको आरोप लगाए । उनले भने,‘मुटुको शल्यक्रिया हुँदा मृगौलाको भागमा किन चिरियो ? सुरुदेखि नै चिकित्सकले गल्ती गरिरहनुभएको छ।’
शल्यक्रियापूर्व अस्पताल प्रशासनले गराउने मञ्जुरीपत्रमा बिरामीको मर्ने सम्भावनामा १ देखि २.५ प्रतिशत रहेको लेखिएको थियो । तर, निधनपछि सोही ठाउँमा टिपेस लगाएर २० देखि ३५ प्रतिशत बनाइएको छ ।’
प्रहरी प्रशासनकहाँ पटक–पटक धाउँदा पनि किटानी जाहेर लिन नमानेको यादवले पनि आरोप लगाए।
उनले थपे,‘कहिले प्रहरी कार्यालय महाराजगन्ज त कहिले सरकारी वकिलको कार्यालय र कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छौं । तर, हाम्रो उजुरी दर्ता गराउन कोही पनि तयार छैनन।’
उनले प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले भने व्यक्तिको नाम हटाएर उजुरी दिए तत्काल मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दै फकाउने गरेको पनि जनाए । त्यस्तै, उनले पछिल्लो समय आफूहरूलाई ज्यानको पनि असुरक्षा महशुस भैरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्दा त्यहाँ अस्पतालका निर्देशक जोतेन्द्र शर्मा, जो बालिकाको शल्यक्रियामा संलग्न थिए, उनी पनि मन्त्री उपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र सचिव पुष्पा चौधरी पनि सँगै थिए।’ मन्त्रालयले उजुरी दर्ता गरेको तर अहिलेसम्म कुनै कारबाही नगरेको उनले सुनाए।
यस्तो लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई जागिरबाट हटाउनुपर्ने र उनको प्रमाणपत्र नै रद्द गर्नुपर्ने यादवको माग छ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया गर्दा फरक रगतका कारण आकृतिकुमारी साहको मृत्यु भएको थियो। आकृतिको शव हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ।
तर, बालिकाका बुवा रामप्रवेशले छोरीको शव कहाँ राखेको छ? भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा नभएको सुनाए।
उनले भने,‘मलाई त इन्साफ चाहिएको छ। तर, खुरुक्क लाश लिएर जान, बढी बोलिस् भने तलाई नालामा फालिदिन्छु भनेर मलाई धम्की दिने गरेका छन्।’ ‘ओ’ पोजेटिभ भएकी आकृतिलाई ‘ए’ पोजेटिभ रगत दिइएको थियो । जसका कारण उनको मृत्यु भयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६, १५:१०:००